Sarkaal Miino baare ah oo lagu dilay Sh/Hoose iyo Weerar ka dhacay Awdheegle.
Wednesday November 06, 2019 - 13:37:48 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax xooggan oo ciidamo katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya lagula beegsaday deegaan katirsan Shabeellaha Hoose.
Wararka ka imaanaya wadada xiriirisa deegaannada Ceelsaliini iyo Lambar50 ayaa sheegaya in qarax miino uu ku dhintay Sarkaal sare oo katirsanaa ciidamada dowladda qeybta Miina Baarista.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in qaraxa uu ku dhintay C/llaahi Cabdi Aadan oo ku magac dheeraa [Roobsade] kaasi oo kamid ahaa saraakiisha Miina baarista ee ka howlgala Shabeellaha Hoose.
Warar hordhac ah waxay sheegayaan in sarkaalka dhintay uu isku dayay in uu kala furfuro miino lagu aasay wadada isku xirta Ceelsaliini iyo Lambar50, dhinaca kale xoogaga Shabaabul Mujaahidiin ayaa xalay weeraro xooggan ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda ee degmada Awdheegle.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta madaafiic iyo rasaas xooggan oo labada dhinac ay is dhaafsanayeen, Idaacadda islaamiga Andalus ayaa sheegtay in weerarka lagu dilay dhowr askari oo katirsanaa ciidamada dowladda.
Taliska ciidanka Melleteriga DF-ka ayaa dhankiisa xaqiijiyay in weerar xooggan ay lakulmeen saldhigyada degmada Awdheegle balse wuxuu ku andacooday in uu is adag isaga difaacay weerarka uga yimid Al Shabaab.